Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Ny minisitry ny fizahantany ara-tsosialy indrindra dia avy any Indonezia
nosy derawan indonesia ftsq
Ny praiminisitra Sandiago Saiahudin Uno, minisitry ny fizahan-tany sy ny toekarena famoronana ho an'ny Repoblikan'i Indonezia dia niditra tao amin'ny World Tour Network Group ny zoma teo mba hiresaka ny fahitany ny fizahan-tany ho an'i Indonezia, ny fomba fijery ary ny fandraisana andraikitra. Ny zoma dia tsingerintaona nahaterahan'ny fifanakalozan-kevitra momba ny dia indray natombok'i WTN tamin'ny 5 martsa 2020
Miaraka amin'ny mpanjohy efa ho 8 tapitrisa ao amin'ny Instagram-ny, ny Andriamatoa Sandiago Saiahudin Uno, Minisitry ny fizahan-tany sy ny toekarena mpamorona ho an'ny Repoblikan'i Indonezia, dia tsy maintsy ho mpitondra fizahan-tany ara-tsosialy indrindra amin'ny governemanta.
"Te-hanatrika tranonkala web betsaka araka izay tratra aho", hoy ny Minisitry ny fizahan-tany Indonezia tamin'ny mpikambana World Network Network.
Indonezia dia mihevitra ireo mpiasa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany ho manome laharam-pahamehana azy ireo amin'ny fahazoana miditra amin'ny vaksinin'ny COVID-19.
Ny Andriamatoa Sandiago Saiahudin Uno, minisitry ny fizahan-tany sy ny toekarena famoronana ho an'ny Repoblikan'i Indonezia, dia nanatevin-daharana ny Tambajotra fizahan-tany manerantany Vondrona amin'ny zoma avy ao amin'ny fiarany mitondra an'i Manado mahafinaritra.
Manado dia renivohitry ny faritany Indonezianina Sulawesi Avaratra. Io no tanàna faharoa lehibe indrindra ao Sulawesi aorian'ny Makassar. Amin'ny maha tanàna lehibe indrindra any avaratr'i Sulawesi, Manado dia toerana fizahan-tany lehibe ho an'ny mpitsidika. Ny fizahantany no nanjary manintona lehibe indrindra tany Manado. Ny fitsorohana scuba sy snorkeling ao amin'ny Nosy Bunaken dia malaza amin'ny mpizahatany ihany koa. Toerana mahaliana hafa koa ny Farihy Tondano, Mount Lokon, Klabat Mountain, ary Mount Mahawu.
Nahamarika jiro mena manjelanjelatra sy maheno feon-tsofina ataon'ny polisy momba ny fanarahan'ny minisitry ny any aoriana, dia niresaka momba ny fomba fijeriny ny fizahan-tany ho an'i Indonezia, ny fomba fijery ary ny fandraisana andraikitra i Uno. Zoma dia tsingerintaona nahaterahan'ny Famerenana indray ny dia fifanakalozan-kevitra natombok'i WTN tamin'ny 5 martsa 2020.
Ny hafany ho an'ireo mpikambana ao amin'ny World Tour Network dia: “Miezaka manatrika tranonkala web betsaka araka izay tratra aho. Ankafiziko ny mpanaraka ahy 7.7 tapitrisa ao amin'ny Instagram, YouTube, ary media sosialy hafa. Miantehitra amin'ny mpikambana ao amin'ny World Network Network aho mba hifanampy mandritra ireo fotoan-tsarotra ireo. ”
Notohizan'ny minisitra hatrany fa miankina amin'ny fivezivezena, fizahan-tany ary indostria famoronana ny fiveloman'ny Indoneziana 34 tapitrisa.
Amin'izao fotoana izao, ny tapany faharoa amin'ny marika amin'ny vaksinina 34 tapitrisa dia ao Indonezia vonona handray an-tanana ny vondrona laharam-pahamehana anisan'izany ny olom-pirenena mihoatra ny 60 taona, polisy, mpiasam-panjakana ary koa ireo olom-pirenena miasa amin'ny sehatry ny fizahantany.
Tanjona ny hampiditra olona 181.5 tapitrisa, miaraka amin'ny vaksiny voalohany mandray vaksinin'ny CoronaVac avy amin'i Sinovac Biotech any Shina, izay nomen'i Indonezia fahefana hampiasaina vonjy maika. Ity dingana ity dia antenaina haharitra 12 volana.
Raha ny voalazan'ny minisitra dia ny fanadihadiana farany dia milaza fa afaka 28 andro aorian'ny nahazoana ilay vaksininy mba ho voaro amin'ny COVID-19.
Ny indostrian'ny fizahantany any Indonezia toy ny any amin'ny firenena maro hafa dia miankina amin'ny fizahan-tany anatiny. I Indonesia dia mifanakalo hevitra amin'ireo faritra any Azia mba hanokafana lalantsara fizahan-tany COVID-19 azo antoka.
Nanaiky ny Minisitry ny fizahantany teo aloha ny avy ao Seychelles, Alain St.Ange, ny amin'ny maha-zava-dehibe ny mampita amin'izao tontolo izao ny toerana hatolotra ny fizahantany. Nilaza tamin'ny minisitra i St.Ange: "Ny milomano miaraka amin'ny jellyfish any Indonezia izay tsy manindrona sy mahita feso feso mavokely dia traikefa nahafinaritra."
Nahitana minisitry ny fizahantany avy any Azia sy Afrika ny fivorian'ny tsingerintaona fizahan-tany eran-tany; tompon'andraikitra ambony amin'ny birao fizahan-tany any Afrika, Malezia, Seychelles, ary Jordania; ary ireo mpikambana ao amin'ny Vondrona Fahalianana momba ny sidina fiaramanidina sy fanabeazana an'ny World Tour Network. Amin'izao fotoana izao, ny WTN dia manana mpikambana eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany 1,500 amin'ny firenena 127.
Niandry fatratra ity fihaonana ity ny minisitra Uno mba hahafahany mizara traikefa amin'ny WTN sy ireo mpikambana ao aminy amin'ny fihoaram-pefy amin'ity toe-javatra sarotra ity.
Nilaza i St.Ange fa miarahaba ny Minisitra noho izy nanatevin-daharana ny dinika ary ny fisokafany hifandray amin'ny tambajotra. Nilaza ny minisitry ny Indoneziana fa mpandraharaha amin'ny alàlan'ny fiofanana.
Fampahalalana misimisy kokoa momba ny World Tour Network: www.tv.travel